> Resource > Flash Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB Sandisk Flash Drive
Si kasta oo ay u soo kabtaan files tirtiray ka USB Sandisk?
dhawaan waxaan tirtirayaa dokumenti muhiim ah oo ku saabsan USB aan drive Sandisk. Waxaan waxba ka qaban la drive, sababtoo ah waan ogahay waxaa jira nooc ka mid ah software soo kabashada oo kaa caawin kara, oo aad rabto in aad hesho file ka dib. Ma waxaa jira mid kasta oo wanaagsan oo lagu talinayaa? Waxaan u baahanahay hal shaqayn kara, ii. Fadlan caawi, mahad!
Marka si qalad ah la tirtiro files ka USB flash Sandisk drives, dad badan oo 'Ma og tahay in files cusub badbaadinta ee drive ee sida joogtada ah u dhaawici doono files tirtiray oo waxaan ka dhigi unrecoverable, sababta oo ah drive la overwritten doono iyo xogta fursdao weligiisba waa Khasaarteen. Sidaas darteed, waxaa jira fursad wanaagsan in aad soo kabsan karno files ka Sandisk USB flash drives.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka Sandisk USB flash drives
Sida in software ah soo kabashada lagu kalsoonaan karo, waxaa jooga talo: Wondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac .
Labada of software si buuxda u taageeraan dib u soo kabashada ee Sandisk flash USB drives, iyadoo aan loo eegayn aad tirtiray, formatted ama xogta laga badiyay sababo kale. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo iyaga waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado files ka noocyada kale ee USB la wado ka badan Sandisk, iyo laptops, drives adag, cajaladaha dibadda, kaararka xusuusta iyo in ka badan.
Next, aynu isku dayi version Windows ee this Sandisk software kabashada xogta USB wada.
Step1. Orod barnaamijka soo kabashada file USB Sandisk on your computer
Ka dib markii socda software Sandisk kabashada USB, waxaad heli kartaa laba hababka soo kabashada raaca Doorashadaada: Wizard iyo Standard Mode.
Labada of qaabab dib u soo kabashada waa ciyaar saaxiibtinimo oo dareen leh. Next, aynu qaadan Wizard sida tusaale.
Step2. Dooro nooca file aad rabto inuu ka soo kabsado USB Sandisk
Step3. Dooro goobta file u soo kabashada, qalabka saari Dibadda
Step4. Sahlo baaritaan qoto dheer oo Start
Step5. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan files tirtiray ka Sandisk USB flash drives
In natiijada scan, dhammaan faylasha recoverable waxaa lagu soo bandhigaa oo si fiican u kala saaraa. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi in ay iyaga oo dhan soo kabsadaan ka mid ah.
Faylal ay haatan la previewed karaa: DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, HTML / HTM, JPG, JP2, jpeg, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF, ZIP iyo rar.